आजको राशीफल : कुन राशीको लागि समय कति लाभदायी होला ? हेर्नुस् - Sacho Post
आजको राशीफल : कुन राशीको लागि समय कति लाभदायी होला ? हेर्नुस्
२०७७ भाद्र २२, सोमबार ०६:४६ बजे
वि.संं. २०७७ साल, भाद्र महिना, २२ गते, सोमवार, आश्विन कृष्ण पक्ष, अनलागा, पञ्चमी तिथि, मेष राशि, भरिणी नक्षत्र, ध्रुव योग, तैतिल करण, गर करण, प्रमादी संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु आजको चाडपर्व र उत्सव : सोह्रश्राद्धअन्तर्गत पञ्चमी श्राद्ध, निजामती सेवा दिवस, भोलिको चाडपर्व र उत्सव : सोह्रश्राद्धअन्तर्गत षष्ठी श्राद्ध, शिक्षा तथा साक्षरता दिवस, त्रिपुष्कर योग राती ०८.१७ मिनेटपछि ।
प्रतिष्ठित काम गर्नाले आत्मविश्वा जाग्नेछ । स्वादिष्ट भोजको योग छ । साथीभाइहरुले सहयोग गर्नेछन् । स्वास्थ्य सबल रहेको छ तर खापानमा ध्यान दिनुहोला । लगनशीलताले नयाँनयाँ काम गर्ने अवसरसमेत दिलाउनेछ।
प्रलोभन देखाउनेहरुको भर पर्नुभन्दा पनि आफ्नै मेहनतले गरेको काम सफल हुनेछ । दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ । कडा मेहनतले जुनसुकै काममा सफल भइएला । बिग्रन लागेको काममा फेरि प्रयास गर्दा सफल भइनेछ । अरुलाई प्रभावित पारेर काम बनाउने समय छ । अरुको विश्वास जित्न सकिनेछ ।
कोशिस गर्दा उठ्नुपर्ने रकम हात लाग्ने समय छ । गरेको काममा सफलता मिल्नेछ । सरकारी वा प्रशासनिक काममा सफलता मिल्नेछ । पितृधनलाई उपयोग गर्न सकिनेछ । सम्मान र पुरस्कार हात पार्नुका साथै दिगो फाइदा हुने काम शुरु गर्ने समय छ । नयाँ अवसरका साथै आम्दानीका स्रोत फेला पर्नेछन्। श्रमको उचित मूल्यांकन हुनेछ।
रोजगारी र व्यापार व्यवसायका क्षेत्रमा मनग्ये फाइदा हुने योग छ । भूमि, वाहन र पैत्रिक सम्पत्तिबाट लाभ मिल्नेछ । दाम, दाम र प्रतिष्ठा कमाउने समय छ । आफनो क्षेत्रमा साख जोगाउन सकिनेछ । विभिन्न अवसरले पछ्याउनेछन् भने दिगो काममा जग बसाउने मौका छ। कार्यसिद्धिको समय छ।
परोपकार र धार्मिक क्षेत्रमा लगानी गरेमा फाइदा हुनेछ । रोकिएको काम शुरु गर्ने समय छ । चिताएको काममा सफलता पाइनेछ । घरायासी सुखको अनुभूति हुनेछ । दाजुभाइ र दिदीबहिनीले दिएको सल्लाह मान्दा फाइदा हुनेछ । व्यापार व्यवसायमा लाभ मिल्नेछ । यात्राको योग छ । चिताएको मूल्य प्राप्त नभए पनि पछिलाई फाइदा हुने काम हातलागी हुन सक्छ।
समय प्रतिकूल रहे पनि सकारात्मक उर्जा प्राप्त हुने समय छ । आँटेका काममा व्यवधान हटाएर उपलब्धि लिन सकिनेकछ । काममा अवरोध र विलम्ब हुने र दोहोर्याउनु पर्नेछ । सहयोगीहरुले साथ दिनाले फाइदा पुग्नेछ । गोप्य रहस्य पत्ता लाग्नेछ । दुरदराज वा नचिताएको ठाउँबाट अचानक धन लाभ हुने योग छ । खानपान र आहारविहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला। दोहोर्याएर प्रयत्न गर्दा आँटेको काम बन्न सक्छ।
साथीभाइको सहयोग र हौसला प्राप्त हुने योग छ । मनपर्ने भौतिक साधन जोड्न सकिनेछ । मनग्ये धनलाभ हुनेछ । आमदानी बढाउने काम शुरु गर्न सकिनेछ । व्यापार व्यवसायमा लाभ मिल्नेछ । कामबाट फुसर्दिलो भइनेछ । अतिथिको रुपमा सत्कार पाइनेछ । प्रयत्न गर्दा दिगो फाइदा हुने काम थालनी हुनेछ।
चिन्ता र शंकाबाट छुटकारा पाइने दिन छ । आर्थिक क्रियाकलापमा सोचेअनुसार फाइदा हुनेछ । तर्क र बहसमा पकड भएको दिन छ । आज सोचविचार गरेर बोल्नुहोला । अनावश्यक वादविवादमा परिनेछ । आत्मसम्मान र स्वाभिमानको रक्षा हुनेछ । काममा देखिएको बाधा हटाउन सकिनेछ । व्यवासायिक काममा फाइदा हुनेछ । रिस र घमण्डलाई त्यागेर व्यवहारमा लचिलो हुँदा फाइदा हुने योग छ ।
अध्ययनमा प्रगति हुनेछ । सेवामूलक कार्यमा फाइदा हुनेछ । विभिन्न उपहार प्राप्त हुनेछ । कृषिमा कामको चाप र चौपायामा समस्या देखिए पनि प्रशस्त धन लाभको अवसर छ । मेहनतले प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका दिलाउनेछ। व्यापारमा धेरै फाइदा नभए पनि पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रबाट लाभ मिल्नेछ। गरेका काम सम्पादन हुनेछन्।
अरुको फाइदाको लागि उपयोग भइनेछ । आश्वासन बाँड्नेहरूले झुक्याउन सक्छन्। बेसुरमा वचन दिने बानीले दुःख पाइनेछ । नजिकका साथीभाइ टाढिनेछ । यद्यपि योजना गोप्य राखी काम गरेमा केही फाइदा हुनेछ । कृषि तथा पशुपालनमा फाइदा हुनेछ । बिग्रिएको सम्बन्ध र पहिलेको कमजोरीलाई सुधार्न सकिनेछ ।
आत्मबल र हिम्मतका साथमा आफ्नो निर्णयमा गरिएको काममा सफलता मिल्नेछ । पराक्रम र प्रसिद्धी कमाउने समय छ । विगतका समस्याहरु समाधान गर्ने समय छ । कमाएको धन सञ्चित हुने तथा पारमार्थिक काममा लगानी गर्नुपर्ने समय आएको छ । श्रममूलक र दौडधूप गर्नुपर्ने कामबाट सामान्य लाभ पाइनेछ । काममा सामान्य चुनौति देखिए पनि फाइदा हुनेछ ।
परिश्रमको बलमा सफलता प्राप्त हुने योग छ । आँटेका ताकेका काममा सफलता मिल्नेछ । गरेको प्रयासअनुरुप व्यवसायिक काममा फाइदा लिन सकिनेछ । वादविवादबाट टाढा रहनुहोला। अर्थ अभावले पनि काममा बाधा पुग्नेछ। आफ्ना सूचनासम्बन्धी गोपनीयतामा ध्यान पुर्याउनुहोला। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट जोगिएर काम लिनुहोला, आजको मिहिनेतले भविष्यमा नाम र प्रतिष्ठा दिलाउनेछ।